€ 303 Ye-FIMI X8 SE FPV Eyodwa | CouponBG.com
Ikhaya » Amadili wekhuphoni » [Isitoko se-EU - CZ] FIMI X8 SE FPV One Batri Version
[Isitoko se-EU - CZ] FIMI X8 SE FPV One Batri Version
Isingeniso Ngabe kuliqiniso ukuthi ufuna i-drone ehloniphekile yokuthwebula izithombe, ehambisana nekhamera ye-4K neqembu elikhulu lezinto ezinhle kakhulu futhi ezingabizi kufika ku- $ 1000? Kahle iXiaomi Fimi X8 SE kungaba i-drone oyifunayo.
Sonke siyazi ukuthi i-DJI ihola imakethe ye-drone yamakhasimende, ikakhulukazi phezulu emakethe ye-drone yezithombe ngochungechunge lwabo lwe-Phantom ne-Mavic lwama-drones. Noma kunjalo, uma ungenawo amandla wezezimali phezulu komugqa we-DJI drone, kunezinye izindlela ezinhle futhi i-Xiaomi FIMI X8 SE drone iphakathi kohlu.
Umklamo Idizayini ye-FIMI X8 SE drone ihluke ngokuphelele ebukeka isiyonke njengento ehlakaniphile ehlangabezana nokulindelwe. Le drone egoqekayo ifaka isakhiwo esinezindlela ezahlukahlukene ezikwenza kube okungajwayelekile. Inezingalo ezine zenjini ezigoqekayo ezinikeza i-drone kancane ukuphakama nobude obuhle kakhulu ukukhulisa amandla ayo. Izimpiko zinikela ngethoni ekubukekeni kwe-drone, engxenyeni ehlukile okungumbono ogoqekayo. Lapho iphela khona i-drone, isayizi enkulu ngandlela thile kuneselula. Lesi yisakhiwo esimangalisayo ne-ergonomic sabahambi. Futhi, isilawuli kude sifana ne-PSP. Iqokomisa izimpondo eziphindwe kabili ngasekupheleni. Esisekelweni esingakwesokunxele, ungathola inkinobho yamandla efihlwe ku-sliver. Phezu kwenkinobho yamandla yindawo lapho iswishi yokuxhuma khona itholakala khona. Imvamisa yaziwa njengemodi yezemidlalo / ye-GPS. Ngaphansi kwenkinobho yamandla yi-Smart Return kunkinobho yasekhaya. Ngaphezu kwakho konke, igajethi inikeza ukubukeka kochwepheshe okwenza ufise ukuba nayo ngaphandle kokucabanga ngezici zayo.
Ikhamera Akungabazeki ukuthi into eyisisekelo yale drone iyikhamera emangalisayo ye-4K, kuyinto emangalisa yehadiwe ezokuvumela ukuthi ubone umhlaba kusuka phezulu nge-HD ephelele. Lesi yisona sizathu sokuba ngothando olulodwa lwe-drones, uthola ithuba lokubona umhlaba ngendlela yokuthi ubungeke ube nenketho futhi I-FIMI X8 SE uthola ilungelo lokuyibuka nge-HD ecace bha. Ikhamera ye-4K ithola ukuzinza nge-3-axis mechanical gimbal ezosula noma yiluphi uhlobo lokuhlanekezela ikunikeze izithombe ezinhle neziqoshwe kahle ngisho nangaphansi kwezimo ezishisayo. Ngekhamera ye-4K, ungaqopha ku-30FPS futhi udlulise ividiyo bukhoma ngqo kuselula yakho lapho uzoba nenketho yokuguqula nokwabelana ngokurekhodwe kwakho ngemidiya eku-inthanethi. Ikhamera ihambisana nenzwa yakwa-Sony ½.3-intshi ehambisana ne-HDR ezobamba imininingwane yesithombe evelele futhi ikunikeze ukwenziwa kwe-shading okungcono. Ikhamera ikulungele ukuthatha izithombe ezihehayo zasemoyeni ku-12MP, ama-specs ekhamera kuphela afanele izindleko ze-drone.
Control Remote Ngidinga ukusho ukuma kokulawula okukude phakathi kokunye engake ngakubona, kwakhiwe kamnandi futhi kuzwakala kukuhle ezandleni zakho. Zonke izilawuli akunzima ukufinyelela kuzo, futhi zinendawo yokudlulisa enkulu engamakhilomitha ama-5, lolu uhla olugqame kakhulu ukwedlula iParrot Anafi neMavic Pro. Kukhona izilawuli zokwehla, ukusuka, ukuthatha izithombe namavidiyo nokudayela okuzokuvumela ukuthi ulawule i-gimbal yemishini.
Ezinye izici I-drone ihambisana nebhethri ye-lipo ehlakaniphile enika igajethi isikhathi sokundiza cishe imizuzu engama-30. Lokhu kulingana noMoya no-DJI Mavic. Uhlelo lokusebenza lwe-FIMI Navi lusebenza ngamagajethi we-iOS ne-Android, lunokusebenzisa okulula isikhombimsebenzisi esingokwemvelo futhi uhlelo lokusebenza olunikeza ukuvuma kuningi lezinto ezinhle kakhulu ezihambisana negajethi.
Isiphetho IXiaomi FIMI X8 SE iyi-drone yekhamera emangazayo ezokuvumela ukuthi uthathe ukuqoshwa okuhle nezithombe ngekhamera yayo ye-4K. Kuyindlela ehloniphekile ngokungafani nabancintisana bayo ababiza kakhulu futhi uthola amaphuzu avelele afanayo ngokuyisisekelo. Ngokuthuthuka kwayo kwendiza futhi kulula ukusebenzisa umlawuli nokusetshenziswa kwayo, i-automaton ilungele bobabili abashayeli bezindiza abanolwazi nabangenalwazi. BanggoodPlay yindawo ekahle yokuthenga le drone ngesilinganiso esihle kakhulu.
KUPHELA € 303 kwe-FIMI X8 SE 2020 8KM FPV ene-3-axis Gimbal 4K Camera HDR Video GPS 35mins Flight Time RC Quadcopter RTF One Battery Version - White No FIMI Premium Care
Lesi sigqebhezana sisebenza kuphela ku- IYUROPHU - CZ ishede! UKUTHUTHELWA KWAMAHHALA NOKUSHESHA KWENTELA okuvela eYurophu! Ukwazi kabanzi nge- Banggood Warehouse kanye Customs TAX ungafunda LAPHA
Into Inguqulo ye-2020 Inguqulo ye-2018
I-FIMI X8 SE I-RC Quadcopter
Ubukhulu: 204 x 106 x 72.6mm
Usayizi Ovundlile: 372mm
Isisindo sento: 765g
Hambisa ngokunemba Kuqondile: ± 0.1m (Ngaphakathi kwebanga lokuthola le-ultrasonic) ± 5m (lapho i-GPS Positioning isebenza)
Ukunemba kokuhambisa phezulu Kuvundlile: ± 1.5m
Isivinini Max enyuka: 5m / s
Isivinini sehla kakhulu: 4m / s
Isivinini sokuhamba ngesikebhe seMax: 18m / s
Ukuphakama komkhawulo wokundiza: 500m
Isikhathi Esiphezulu Sezindiza (awukho umoya): Cishe ngama-35mins (ngejubane elingu-8m / s) Isikhathi sokushaja: 3.5h
Ukumelana nomoya: K50kph
Izinhlelo zokubekwa kwesathelayithi: IGPS + GLONASS + BEIDUO
Imvamisa yokusebenza: I-5.725-5.850 GHz
Iphakheji Isisindo: cishe 1.97KG
Usayizi wephakheji: 287 x 247 x 96mm
Isisindo sento: 790g
Isikhathi Esiphezulu Sezindiza (awukho umoya): Mayelana nama-33mins (ngejubane elingu-8m / s) Isikhathi sokushaja: 3.5h
Izinhlelo zokubekwa kwesathelayithi: IGPS + GLONASS
Ubukhulu: 203.8 × 91 x 46.6mm
Imvamisa yokusebenza: 5.725-5.850GHZ
Ububanzi obulawulwayo obukhulu: Cishe ngama-8000m
Ibhethri: 3900mAh lithium battery
Amandla kagesi: 3.7V
Shaja uhlobo lwembobo: I-Micro USB
Ukufaka: 5V -2A Imodi: Imodi 2 ( mpintsha wesandla sobunxele)
Max ibanga luyalawuleka: Cishe ngama-5000m
Ibanga lokujikeleza elilawulwayo: 0 ° 〜-90 ° Pitch engela
Ukulawulwa kwe-engela ukunemba: ± 0.004 °
Ukuqinisa: I-3-axis gimbal
Ikhamera ye-HD 4K
I-Lens: I-FOV 80 °
Ibanga lokugxila: 3.54mm
Ibanga eligxile ngokulinganayo: 26mm
Izwa: 1 / 2.6 ″ CMOS
Amaphikseli asebenzayo: 12M
Uhla lwe-ISO: I-100 - 3200 yevidiyo engu-100-1600 okwamanje
Ijubane lokukhipha: 32 ~ 1 / 8000S
Ukulungiswa kwevidiyo: I-4K UHD: 3840×2160 30/25/24fps
Uhlelo lwefayela: FAT32 / exFAT
Ifomethi yesithombe: I-JPG; I-JPG + DNG
Uhlobo lwekhadi lememori: I-Micro SD (U3 noma ngaphezulu) 8 - 256GB (ukuncoma kweSandisk / Kingston U3)
I-Lens: I-FOV 78.8 °
Ibanga lokugxila: 4.73mm
Ibanga elifanayo lokulingana: 26mm
Inzwa: 1 / 2.3, CMOS
Uhla lwe-ISO: 100 - 3200 yevidiyo 100-1600 yesimanje
Ijubane lokuvala: 8 ~ 1 / 8000S
Isixazululo sesithombe esikhulu: 4000 * 3000
Ukulungiswa kwevidiyo: 3840 × 2160 30/25 / 24fps
Ifomethi yesithombe: JPG; I-JPG + DNG
Uhlobo lwekhadi lememori: I-Micro SD (U3 noma ngenhla) 8 - 64GB (Isincomo seSandisk / iKingston U3)
Ubuningi be-bitrate: 100Mbps
Kukalwe okukhishwayo :I-13.05V -3A
amandla Kukalwe: 39.15W
Okokufaka okulinganiselwe 100-240V~50/60Hz1.5A
Ukushaja umkhawulo voltage: I-13.05V-3A
Umthamo: 4500mAh / 51.3Wh
isisindo: Mayelana ne-270g
Ukushisa okusebenzayo: I-0-40 ℃
Ukuphakama okufanelekile: ≤5000m
Amazinga wokuqalisa: Q / BJFMK0001-2016
I-ID: 1658676 - SKUE85031
[EU stock - CZ] T10 2000W Dual Motor 23.4Ah 10 Inches E-Scooter neSihlalo
Tags: [Isitoko se-EU]I-FIMIRCSEX8X8SEXiaomi
I-Xiaomi RedmiBook Pro 14 2021 Laptop 14.0 inch 2.5K High-Resolution 100% sRGB AMD Ryzen R7-5700U 16G DDR4 3200MHz RAM 512G SSD 300nits Type-C Backlit Fingerprint Camera WiFi 6 Notebook
Sebenzisa ikhodi yekhuphoni:BG7c12ce
I-AtuMan DUKA LI1 2 Koku-1 Dual Laser Protractor Digital Level Ruler Okungabuyekezwa okungama-360 ° Okuphikisanayo kwe-Angle Cast Line Measurement
Sebenzisa ikhodi yekhuphoni:BG67a1ab
I-XCY X30 Mini PC Computer Intel Celeron N2955 Barebone Quad Core Win 10 Desktops Office HTPC VGA HDMI WIFI Gigabit LAN 5xUSB
Sebenzisa ikhodi yekhuphoni:IphromoNOCOUPON
SG 1401 1402 RTR 1/14 2.4G 4WD Full Proportional Front LED Light RC Car Climbing Off-Road Truck - I-SG-1402
Sebenzisa ikhodi yekhuphoni:BGSG14RC